Home » Community & Society » သွားကြည့်မိတဲ့ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲလေး
Posted by Nyein Nyein on Oct 15, 2013 in Community & Society, Creative Writing, My Dear Diary, Society & Lifestyle | 17 comments
ရွာထဲကို မရောက်တာတော်တော်ကြာပါပြီ။ အခုတလောတော့ စာဝင်ဖတ်ဖြစ်ပေမယ့် မမန့်ဖြစ်ပါဘူး။
ဦးမိုက်ရဲ့ပို့စ်ကို မြင်လိုက်တော့ စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လူဆိုးလေးဖြစ်နေမှန်းပိုသိသွားတယ်။
( အလုပ်တွေ နည်းနည်း ရှုပ်နေလို့ ရွာထဲမရောက်တာပါ…. )
ပြောချင်နေတာတွေ အများကြီးရှိနေတာပါ။ အရင်ဆုံးတော့ ဟိုတလောက သွားဖြစ်ခဲ့တဲ့ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲလေးအကြောင်း ပြောချင်လို့ပါ။ (ဟိုတလောဆိုပေမယ့်လည်း နည်းနည်းလေးတော့ ကြာနေပါပြီ။ )
ဂျပန်သံရုံးကနေ စီစဉ်ပြီးလုပ်ပေးတဲ့ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲလေးပါ။ ဂျပန်သံရုံးကနေ ပြိုင်ပွဲတွေ လုပ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဂျပန်စာလေ့လာနေတဲ့သူတွေကို အားပေးတဲ့သဘောနဲ့ လုပ်ပေးတဲ့ပွဲတွေပါ။ တစ်ချို့ပြိုင်ပွဲတွေက ပထမဆုရရင် ဂျပန်ကိုသွားခွင့်ဆိုတာမျိုးအထိ ဆုကြေးကကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာတော့ ဆုတွေက အရမ်းကြီးကြီးမားမား မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာ နောက်ဆုံးအဆင့်အတွက် ပြိုင်ပွဲဝင် (၁၅) ယောက် ပြိုင်သွားပါတယ်။ ဒိုင်လူကြီးတွေကတော့ ဂျပန်တွေပါသလို၊ မြန်မာတွေလည်းပါပါတယ်။ မြန်မာဒိုင်တွေက အဆိုတော် ဖိုးကာရယ်၊ နောက်ပြီး ဂီတာမိတ်သင်တန်းကျောင်းရဲ့ တစ်ယောက်(ဆရာလား၊ သင်တန်းဥက္ကဋ္ဌလား သေချာမသိပါဘူး)။ စုစုပေါင်း နှစ်ယောက်ပါ။ ဂျပန်ဒိုင်တွေကိုတော့ သေချာမသိပါဘူး။
ပြိုင်ပွဲလေးအကြောင်းကို အကျဉ်းချုံးပြောပြီးပြီဆိုတော့ကာ………. တကယ်ပြောချင်တာက အခုမှစမှာပါ။
အဲဒီ့ ပြိုင်ကြတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေထဲမှာ ဂျပန်စာလေ့လာနေတဲ့သူတွေ ပါသလို၊ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီးရောဆိုပြီး လာပြိုင်တဲ့သူတွေလည်း ပါနေတယ်ထင်လို့ပါ။ ဒီပြိုင်ပွဲလေးက တကယ်ဆိုပွဲသေးသေးလေးပါ။ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ နိုင်လို့လည်း နာမည်ကျော်နိုင်တာမျိုးမရှိနိုင်သလို(ထင်တာပဲ)၊ ဆုကြီးကြီးမားမားရနိုင်တာမျိုးလည်း မရှိပါဘူး။ အဲဒါကို မသိလို့ဘဲလား၊ သိသိနဲ့ပဲလားတော့ မပြောတတ်ဘူး နာမည်ကြီးပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ ဒုတိယဆု ရထားပြီးသားလူက လာဝင်ပြိုင်သတဲ့လေ။ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမို့လို့ လာပြိုင်တာကိုလက်ခံချင်ပေမယ့် သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ဂျပန်စာကို မသိသလို၊ ဂျပန်စာလေ့လာနေတာလည်း မဟုတ်ဘူးလို့ အခြားတစ်ယောက်ကို ပြောနေတာကို ကြားလိုက်ရတယ်။ ဂျပန်စာလေ့လာနေတဲ့သူတွေကို အားပေးတဲ့အနေနဲ့ လုပ်ပေးတဲ့ပွဲကို ဂျပန်စာမလေ့လာနေသလို၊ ပြိုင်ပွဲအကြီးကြီးတစ်ခုမှာ ဒုတိယရထားပြီးသားသူက လာပြိုင်တာဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ စိတ်ထဲတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။ ဆိုသွားတာတော့ တကယ်ကောင်းပါတယ်။
သူဆုရဖူးတဲ့ ပြိုင်ပွဲက နောက်ဆုံးမှာ ဆုရထားတဲ့လူတွေနဲ့ level မြင့်မြင့်ရောက်တဲ့လူတွေကို ပေါင်းပြီး အခွေထုတ်ပေးပါတယ်။ အခွေထုတ်ဖူးတဲ့သူဆိုရင် အဆိုတော်ဖြစ်သွားပြီလို့ သတ်မှတ်လို့ရတယ်လို့ ထင်တယ်။ အဲတော့ အဆိုတော်တစ်ယောက်က ပြိုင်ပွဲသေးသေးလေးမှာ လာဝင်ပြိုင်သလို ဖြစ်မနေဘူးလား။ တကယ်ဆို မပြိုင်သင့်ဘူးလို့လဲ တွေးမိတယ်။
ပြိုင်တဲ့သူကတော့ ပြိုင်ချင်စိတ်တစ်ခုထဲနဲ့ လာပြိုင်တာဆိုတော့ အများကြီး မစဉ်းစားမိဘူးဘဲ ထားပါတော့။ ရွေးတဲ့လူတွေကကော ပြိုင်ပွဲရဲ့ အဓိကအချက်ကို မစဉ်းစားဘဲနဲ့ ပြီးပြီးရော ရွေးလိုက်တာလားဆိုတဲ့ အတွေးက၀င်လာပါတယ်။ သြော်…… ပြောဖို့တစ်ခုကျန်ခဲ့သေးတယ်။ အဲဒီ့ပြိုင်ပွဲဝင်က ဂီတမိတ်သင်တန်းမှာ လက်ရှိ သင်တန်းတက်နေပါတယ်တဲ့လေ။ အဲတော့ကား…… ဒိုင်တွေထဲမှာ ဂီတမိတ်သင်တန်းက တစ်ယောက်ပါပါတယ်။ ကျန်တဲ့ဒိုင်တွေမသိရင်တောင် သူတော့ သိမယ်လို့ထင်တာပဲ။ သိသိရက်နဲ့ပဲ ပထမဆုပေးလိုက်တာလား? ဒါမှမဟုတ် သတိမရလိုက်လို့ဘဲ ပထမဆုပေးလိုက်တာလား? ဆိုတာကိုတော့ မတွေးတတ်တော့ဘူး ဖြစ်နေတယ်။
ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကော၊ တာဝန်ရှိသူတွေပါ လိုနေတယ်လို့ ထင်တာပဲ။ နောက်အခေါက်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ စဉ်းစားလို့ရအောင် အကြံပြုစာမှာတော့ ပြောချင်တာတွေ ရေးပေးခဲ့တာပဲ။ လုပ်တာ၊ မလုပ်တာတော့ သူ့အပိုင်းပေါ့။ ပြောရမှာတော့ ကိုယ်အပိုင်းဆိုတော့ ပြောခဲ့တာပဲ။
အခုလို အဆုံးထိဖတ်လိုက်တော့ ညိမ်းညိမ်းပြောသလိုပဲ ရိုးသားမှု့မရှိတာတော့တော်တော်လေးထင်ရှားပါ တယ်။ ဘယ်သူသိသိမသိသိ ကိုယ့်လိပ်ပြာတော့ကိုယ်သိသမို့ အဲလိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။
မလုပ်သင့်ဘူး လို့လည်း မြင်မိတယ်
ပို ဆိုးတာက ဒိုင်ထဲမှာတောင် သင်တန်းဆရာ ပါရဲ့နဲ့
ဘာမှ မပြောဘူး ဆိုတော့ကာ
သူကများ ဝင်ပြိုင်ခိုင်းတာလေလား ပေါ့
ပြိုင်ပွဲ စ ပြီဆိုတာနဲ့ လူသိရှင်ကြား စည်းကမ်းချက်တွေတော့ ကြေငြာမယ်ထင်ပါတယ်။
ရွေးကတည်းက ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းနဲ့ရွေးရင်တော့ ဒီလို သို့လော သို့လော ဖြစ်ချေ နည်းရတာပေါ့လေ။
သူတို့ စည်းကမ်းချက်တွေက ဘာတွေမှန်းမှ မသိကွယ်။
ဂျပန်ဘာသာစကား သင်သူတွေကို အားပေးတဲ့အနေနဲ့ လုပ်တဲ့ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲဆိုကတည်းက ဂျပန်ဘာသာလေ့လာနေသူတွေကိုသာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပေးသင့်တာပေ့ါ။
ငြိမ်းပြောချင်တာလည်း အဲဒါပါပဲ မသဲနုရေ… နောက်ပွဲတွေမှာ ရိုးရိုးသားသား ဖြစ်ပါစေလို့တော့ ဆုတောင်းမိတယ်။
@ Mr.MarGa :
သိကြားတွေးတဲ့အတိုင်း ငြိမ်းလည်း တွေးမိတာပေါ့ကွယ်။
ငြိမ်းကြားမိတာကတော့ ပြိုင်ဖို့ ဖောင်တင်တဲ့ထဲမှာ ဂီတမိတ်ကအခြား သင်တန်းသူားတွေလည်း ပါတယ်လို့ကြားပါတယ်။ လူရွေးတဲ့အထဲမှာ ပြုတ်ကြတယ်လို့ကြားပါတယ်။
@ KZ :
မဆွိပြောသလို လူသိရှင်ကြား စည်းကမ်းချက်တွေကို ကြေညာလားတော့ သေချာမသိပါဘူး။ ငြိမ်းကတော့ အဲလိုလုပ်သင့်တယ်လို့ထင်တာပဲ။
ငြိမ်းသိသလောက်ကတော့ ပြိုင်ပွဲအတွက် အသံသွင်းထားတဲ့ အခွေရယ်၊ ဖောင်ရယ်ပေးရပါတယ်။ ပြီးတော့မှ သူတို့က ဖုန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ မေးလ်ကိုဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းကြားတာပါ။ အကြောင်းကြားခံရတဲ့ လူတွေကိုပဲ တီးဝိုင်းနဲ့ အစမ်းလေ့ကျင့်ဖို့ တစ်ရက်ခေါ်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲနေ့ပဲရှိတော့တာပါ။
ဆိုတော့ကား….. ဘယ်လိုစည်းမျဉ်းတွေနဲ့ ရွေးတာလဲတော့ သေချာမသိဘူး။
@ Ma Ma :
ငြိမ်းလည်း အဲဒီ့လိုပဲတွေးတယ် အန်တီမမရေ….
အဲဒီလိုအားပေးတဲ့ပွဲပါဆိုမှ သူတို့လုပ်ပုံနဲ့တော့ ပြိုင်တဲ့သူတွေ အားတော်တော်တက်မယ်။
အခုတလော ရွာထဲမ၀င်ဖြစ်သလို ၀င်ဖို့ကလည်း ခက်သလိုပဲ။ ၀င်လိုက်ရင် wordpress error ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။ ၀င်လို့ရတုန်းလေး တင်လိုက်ရတာပါ။
comment ပေးတဲ့အတွက် အားလုံးကို ကျေးကျေးပါနော်………
ကိုယ့်ထက် အားနည်းသူကို ညှာတာတာ
သီချင်းက ဂျပန်သီချင်းပဲ ပြိုင်တာပါ။
သူပြိုင်တဲ့ သီချင်းက ခက်တယ်။ ရှည်လည်းရှည်တယ်။ ချီးကျူးစရာကောင်းတာကတော့ ဂျပန်စာမတတ်ပေမယ့် နားထောင်ပြီး အလွတ်ကျက်ပြီးတော့ ပြိုင်တာပါတဲ့။ စာသားနည်းနည်းလွဲနေတာတော့ ရှိတယ်တဲ့လေ။
သူကိုယ်တိုင်က အခြားတစ်ယောက်ကို ပြောနေတာကို ကြားလိုက်တာပါ။
“ကိုယ့်ထက် အားနည်းသူကို ညှာတာတာ စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့အလုပ်ပါ။”
မှန်လိုက်လေ အာတီတုံရယ်။ အာတီတုံပြောတာကို အပြည့်အ၀ကို လက်ခံပါတယ်။
ဝင်ရောကက် ဖတ်ရှု လေ့လာသွားပါတယ်။
ဖြူဖြူကျော်သိန်း ဝတ်တဲ့ ဝတ်စုံတွေကို အံ့သြနေမိတာ
ညီးပစ်ကြွေသွားတယ်မဟုတ်လား အိုက်ဖူဖူကော်တိန်းဂျီးကို။ ဖက်ထားချင်ဒယ်ဆိုလား ဟိုနေ့က
ထိပ်စီးရော အလယ်ထိုင်ရော နောက်ပိတ်ပါ
celebrity တွေအတွက်ကတော့ ကိုယ်ထွင်တော့ ကိုယ့်စတိုင်ဆိုပြီး ထွင်ကြတာပေါ့ကွယ်။
celebrity မှဟုတ်ပါဘူး။ အခုက အားလုံးနီးပါးက ကိုယ်ထွင်ရင် ကိုယ့်စတိုင်ဖြစ်တာပေါ့ဆိုပြီး ထွင်ဝတ်နေကြတာများသလိုပဲ။
စိတ်ပျက်စရာကြီးပါလားကွယ်။ဘာသာစကားတိုးတက်အောင်လုပ်ပါတယ်ဆိုမှ ကိုယ့်ဘာသာကို စိတ်ဝင်စားလို့ သင်နေတဲ့သူတွေပဲ ပြိုင်သင့်တာပေါ့။ အဆိုတော်ရွေးပွဲမှမဟုတ်တာ။ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနလည်း အဲလိုတွေလုပ်တတ်တယ်။
နောက်ပွဲတွေတော့ စိတ်ပျက်စရာမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းရတာပဲကွယ်။
သင်တန်းသားတွေချည်းပဲဆို လူမစည်မာစိုးလို့လား မသိဘူးနော်..
ငြိမ်းလည်း မပြောတတ်တော့ပါဘူး မမ၀ိုးရေ…….
နောက်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ စည်းကမ်းလေးသေချာသတ်မှတ်ရင် ပိုကောင်းမယ်။